Roba (maka idozi clamps)
A na-eji akwa roba a maka idozi ọkpọkọ, hoses na eriri.
Obere sooks mwekota
Obere mgbako a nwere ikike iguzogide ngwa ngwa maka echichi di mfe ma dikwa nma maka obere ulo ndi pere mpe n’elu ulo ndi na enweghi ihe.
Nnukwu anwụrụ na-ejide ya na roba
Nnukwu ọkpọkọ ọkpọkọ na roba bụ ihe pụrụ iche a na-eme iji dozie pipeline kwụsịtụrụ.
Double waya sooks mwekota
Ugboroko uzo abuo na abuo di na abu abu. Igwe eriri waya dị iche iche dị ka nha. Enwere ike ịhazi ọkwa anaghị edepụtara na tebụl ahụ.
Ugboro abụọ ntị sooks mwepu
A na-eji sọlfọ nchara rụọ nke akpọrọ nke nwere ntị abụọ pụrụ iche, a na-eji akwa dị mma emere zinc.Compact na akwa dị mfe chọrọ mgbakọ caliper.
Akwa sooks mwekota
A na-ejikọ akwa hose clamps n'ụzọ pụrụ iche maka ndị ọkpọ, ndị ibe na-atụgharị aka ekpe na aka nri iji mee ka kaadi zuru oke mechie ọkpọkọ sag.The hose nwekwara ike jikọọ na mkpuchi uzuzu, ọnụ ụzọ mgbawa, njikọ na ngwa ndị ọzọ iji mepụta ihe siri ike na sistemụ uzuzu siri ike. Designme akwa ahụ na-enye ike ịbanye n'ime bat ahụ, na-etinye oghere ọsụsọ ahụ maka akara na njikọ dị nchebe. Robust igwe anaghị agba nchara na - arụ ọrụ maka anwụ ngwa ngwa.